မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ ဒေါ့မွန်တို့ ဆန်ချိုအတွက် သဘောတူညီဖို့ အနီးစပ်ဆုံးအနေအထား ရောက်လာ – Sports A2Z
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ ဒေါ့မွန်တို့ ဆန်ချိုအတွက် သဘောတူညီဖို့ အနီးစပ်ဆုံးအနေအထား ရောက်လာ
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းက အလိုရှိနေပြီး ဒေါ့မွန်ရဲ့ ဈေးကိုင်မှုကို ခံနေရလို့ လက်ရှိအချိန်အထိ ကြန့်ကြာနေခဲ့ရတဲ့ တောင်ပံ ကစားသမား ဂျေဒန် ဆန်ချိုအတွက် နောက်ဆုံးအကြိမ် ကမ်းလှမ်းမှုက တော်တော်လေးကြီးမားခဲ့ပြီး ဒီတစ်ခါမှာတော့ သဘောတူညီမှု ရရှိနိုင်ဖို့ အလွန်နီးစပ်တဲ့ အနေအထားကို ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီသတင်းရဲ့ ရင်းမြစ် အစပြုရာကတော့ ဂျာမန်သတင်းစာ Bild ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန်အင်အားကြီးအသင်းအနေနဲ့ ဆန်ချိုကို ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ တစ်ကျော့ပြန် ခြေချနိုင်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုဖြစ်တဲ့ သုံးနှစ်တာ အရစ်ကျပေးချေမှုနဲ့ ခေါ်ယူသွားမယ်လို့လည်း ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒေါ့မွန်က အလိုရှိနေတဲ့ ယူရိုသန်း ၁၂၀ ကို ခွဲပြီး ပေးချေသွားမယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကတော့ ဒီနှစ်မှာ ယူရိုသန်း ၇၀ (ပေါင် ၆၃ သန်း)၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ယူရိုသန်း ၃၀ (ပေါင် ၂၇ သန်း)နဲ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ယူရိုသန်း ၂၀ (ပေါင် ၁၈ သန်း) အသီးသီး ပေးချေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Bild က ထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီး တချို့သတင်းတွေကတော့ နောက်ဆုံးသန်း ၂၀ ဟာ အောင်မြင်မှုအပေါ် မူတည်တဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်လို့ ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
Man United idea has always been to pay Sancho using ‘add ons’ and paying in more years 👌🏻 they’re still working on this kind of deal to find an agreement with BVB. Let’s see what will happen on next days.
ဒီသတင်းကိုလည်း ထောက်ခံမှုပြုတဲ့ သဘောမျိုးဆန်ဆန်ကို အီတလီဂျာနယ်လစ် ဖက်ဘရီဇီယို ရိုမာနိုက ဆိုခဲ့ပြီး ဒေါ့မွန်က အလိုရှိနေတဲ့ ယူရိုသန်း ၁၂၀ (ပေါင် ၁၀၈ သန်း)ကို ခွဲဝေပေးချေတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ သဘောတူညီနိုင်အောင် ယူနိုက်တက်ဘက်က ကြိုးစားနေတယ်လို့ သူ့ရဲ့ တွစ်တာအကောင့်ကနေ ဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။
ဆန်ချိုအတွက် အထက်ပါပြောင်းရွှေ့ကြေးကို ပေးချေခဲ့ရင်တော့ ဒီပမာဏဟာ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်ရဲ့ ကလပ်စံချိန်တင် ကစားသမားခေါ်ယူမှု ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးအမြင့်မားဆုံး ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဆီ ပေးချေထားခဲ့ရတဲ့ ကွင်းလယ်လူ ပေါလ် ပေါ့ဘာရဲ့ ပေါင် ၈၉.၅ သန်း(ယူရိုသန်း ၁၀၀) ဈေးနှုန်းကို ချိုးဖျက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
REF: BILD & FABRIZIO ROMANO’S TWITTER
UNICODE: မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးက အလိုရှိနပွေီး ဒေါ့မှနျရဲ့ ဈေးကိုငျမှုကို ခံနရေလို့ လကျရှိအခြိနျအထိ ကွနျ့ကွာနခေဲ့ရတဲ့ တောငျပံ ကစားသမား ဂဒြေနျ ဆနျခြိုအတှကျ နောကျဆုံးအကွိမျ ကမျးလှမျးမှုက တျောတျောလေးကွီးမားခဲ့ပွီး ဒီတဈခါမှာတော့ သဘောတူညီမှု ရရှိနိုငျဖို့ အလှနျနီးစပျတဲ့ အနအေထားကို ရောကျလာခဲ့တယျလို့ သတငျးတှကေ ဖျောပွခဲ့ကွပါတယျ။
ဒီသတငျးရဲ့ ရငျးမွဈ အစပွုရာကတော့ ဂြာမနျသတငျးစာ Bild ဖွဈပွီး အင်ျဂလနျအငျအားကွီးအသငျးအနနေဲ့ ဆနျခြိုကို ပရီးမီးယားလိဂျမှာ တဈကြော့ပွနျ ခွခေနြိုငျဖို့အတှကျ လုံလောကျတဲ့ ကမျးလှမျးမှုဖွဈတဲ့ သုံးနှဈတာ အရဈကပြေးခမြှေုနဲ့ ချေါယူသှားမယျလို့လညျး ဖျောပွခဲ့တာဖွဈပွီး ဒေါ့မှနျက အလိုရှိနတေဲ့ ယူရိုသနျး ၁၂၀ ကို ခှဲပွီး ပေးခသြှေားမယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျရဲ့ ကမျးလှမျးမှုကတော့ ဒီနှဈမှာ ယူရိုသနျး ၇၀ (ပေါငျ ၆၃ သနျး)၊ ၂၀၂၁ ခုနှဈအတှငျးမှာ ယူရိုသနျး ၃၀ (ပေါငျ ၂၇ သနျး)နဲ့ ၂၀၂၂ ခုနှဈအတှငျးမှာ ယူရိုသနျး ၂၀ (ပေါငျ ၁၈ သနျး) အသီးသီး ပေးခသြှေားမှာဖွဈတယျလို့ Bild က ထုတျဖျောခဲ့ပွီး တခြို့သတငျးတှကေတော့ နောကျဆုံးသနျး ၂၀ ဟာ အောငျမွငျမှုအပျေါ မူတညျတဲ့ အကြိုးခံစားခှငျ့လို့ ဆိုခဲ့ကွပါတယျ။
ဒီသတငျးကိုလညျး ထောကျခံမှုပွုတဲ့ သဘောမြိုးဆနျဆနျကို အီတလီဂြာနယျလဈ ဖကျဘရီဇီယို ရိုမာနိုက ဆိုခဲ့ပွီး ဒေါ့မှနျက အလိုရှိနတေဲ့ ယူရိုသနျး ၁၂၀ (ပေါငျ ၁၀၈ သနျး)ကို ခှဲဝပေေးခတြေဲ့ ပုံစံမြိုးနဲ့ သဘောတူညီနိုငျအောငျ ယူနိုကျတကျဘကျက ကွိုးစားနတေယျလို့ သူ့ရဲ့ တှဈတာအကောငျ့ကနေ ဖျောပွသှားခဲ့ပါတယျ။
ဆနျခြိုအတှကျ အထကျပါပွောငျးရှကွေ့ေးကို ပေးခခြေဲ့ရငျတော့ ဒီပမာဏဟာ အိုးလျထရကျဖို့ဒျရဲ့ ကလပျစံခြိနျတငျ ကစားသမားချေါယူမှု ဖွဈလာမှာဖွဈပွီး နောကျဆုံးအမွငျ့မားဆုံး ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဆီ ပေးခထြေားခဲ့ရတဲ့ ကှငျးလယျလူ ပေါလျ ပေါ့ဘာရဲ့ ပေါငျ ၈၉.၅ သနျး(ယူရိုသနျး ၁၀၀) ဈေးနှုနျးကို ခြိုးဖကျြသှားမှာဖွဈကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။